Rasaasa News – Madaxwaynaha Ismaamulka Somalida Itoobiya [ISI] Cabdi Iley oo Khudbad ka Jeediyey 23-tan Guurada TPLF, Kula Wareegtay Talada Atoobiya.
on May 29, 2014 2:16 pm
Jijiga, May 29, 2014 – Madaxwaynaha oo la hadlayey xubnaha maamulkiisa iyo Qurbo-joog marti ku ah Jijga oo dibada looga yeedhay, ayaa ku dheeraaday amaanta TPLF.
Madaxwaynuhu wuxuu ugu hambalyeey ururka TPLF, in uu xoreeyey shaca Somalida, oo gumaysi ku jiray muddo dheer.
Waa hadal yaab leh! [nin Carab ah, ayaa nin Somali ah oo aad u madow, oo ay wada shaqaynayeen ku yidhi magacaa, kolkaasuu yidhi NUUR, Carabkii baa ugu jawaabay hadii uu Nuurkiinu (casiin) adiga yahay, kuwiina madow tolow siday u eg yihiin!]
Khudbada madaxwaynaha oo aad u dheerayad waxaa ugu muhiimsanaa difaaca waxqabadka maamulkiisa iyo xoriyada ay TPLF gaadhsiisay shacabka Somalida sida uu sheegay. Madaxwaynuhu wuxuu ku nuux nuuxsaday in xoriyada ay TPLF, gaadhsiisay Somalida Ogaden in ay ku naaloonayaan ugana mahad celinayaan gobonimada ay haystaan TPLF.
La iskulama yaabo garashada iyo aaminaada midna. Laakiin waa hadal taariikhda u gali doona Cabdi Iley in TPLF, ay xoraysay Somalida Ogaden iyo in waxqabada daayoo ay TPLF burburisay guud ahaan ummada Somalida.
Madaxwaynaha ayaa nacalad tusha kaga tuuray ururkii Leag ee uu gudoomiyaha ka ahaan Dr. Cabdi Majiid. Isaga oo sheegay in Leag uu ka xumaa ONLF, wuxuuna sabab ka dhigay in ay isku dareen “calanka” Somaliya iyo “calanka” Atoobiya. Madaxwaynuhu wuxuu yidhi in ay ONLF, xoogaysato waxaa ka dambeeyey ururkii Leag, oo shaqada ka caydhin jiray beesha ugu badan ururka ONLF.
Madaxwaynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa ku dooday in ONLF, ayna xumayn, laakiin ay ku jireen kuwa xun oo shacabka laaya. Madaxwayne Cabdi Iley wuxuu yidhi magaca “UBO” waxaan ula jeednaa kuwa xun.
Ma cada sababta xiligan Cabdi Iley ka keentay in uu difaaco magaca ururka ONLF. ONLF, waa urur gobonimo doon ah, oo ujeedadiisu tahay in uu xoreeyo shacabka Somalida Ogadeeniya ee ay Atoobiya gumaysato.
Madaxwaynaha oo hadalkiisu aad dheeraa nuxurkiisuna yaraa, ayaa soo qaatay taariikhda ururkii gobonimodoonka Somali galbeed [wester somali liberation front (WSLF)], isaga oo sheegay in halgankaasi uu sax ahaa oo uu la dagaalamayey Derg. Ujeedadiisiina uu gaadhay oo micnaha uu ula jeedo TPLF, baa keentay xoriyadii ay u dagaalamayeen.
Waxaa iswaydiin leh, taariikhda Somalida Ogaden waxa ay tahay iyo waxa ay ku sugan tahayba waa mid cad oo aduunka oo dhan ogyahay, waxaana laga daawanyaaa madaxwaynaha TV ay Somali oo dhan daawanayso “sheeko marfash” bah-dil waxay ku tahay dadka Somalida Ogaden iyo ISI laftigeeda.
Waxaa kale oo madaxwaye Cabdi Iley sheegay in gumaysiga Ingriisku uu doonayey in uu ka gooyo Somalida Ogadeeniya Atoobiya, taasna waxaa diiday buu yidhi odayaasha Somalida. Wuxuuna ku amaanay in odayaashii arintaa sameeyey ay ku saxnaayeen. Ma oday Somaliyeed baa go,aan qaadan karay!
1949 Ingriis wuxuu UN-ta u bandhigay in Somali badankeed uu gumaysto wuxuuna codsaday in loo ogolaado in uu gumaysto dhamaanteed. Kolkii ay socon waydayna isaga oo aan cidna la tashan ayuu bixiyey NFD iyo Ogaden. Madaxwayne Cabdi in xiligan uu ku faano in Ogaden Atoobiya sharci daro lagu siiyay, waxay cadayn u tahay dhibaatada uu shacabka Somalida ku hayo iyo sida uu u jecel yahay in Somali dabar go,odo. Waxaana ka keenaysa Cabsida ay ku hayaan kuwa uu amaanayo TPLF!
Dhinaca horumarka, madaxwayne Cabdi wuxuu ka garaabay in ay sax yihiin kuwa uu UBO ugu yeedho ee dibada jooga. Kuwaas oo sheega in aan horumar wadanka ka jirin, laakiin uu bilow jiro. Madaxwayne Cabdi wuxuu yidhi waa sax wali horumar ma aanaan gaadhin, laakiin wax badan baan qabanay, in aan kordhino ayaana loo baahan yahay.
Jumlada ugu dambaysa khudbada Madaxwayne Cabdi Iley, ee ku aadanayd sanad guurada 23-aad ee TPLF, waa hadal run ah oo garwaaqsi ah.